श्रीमतीलाई छोरालाई धोका दिएर अर्को विवाह त गर्न हुँदैनथ्यो भन्ने त लागेको छ तर म अहिले निकै खुसी छु (भिडियो सहित) – Purba Aawaj
प्रकाशित मिति: शनिबार, बैशाख २५, २०७८ समय: १३:४३:२७
श्रीमान श्री’मती दुई वर्ष पछि भेट भए । सानो छोरा पनि अहिले अलि ठूला भएछन् । तर पनि उ’नलाई श्रीमती र छोराको कुनै माया लागेन । उनले अर्काकै श्रीमती लिएर हि’डेका हुन् । तर पनि अ’हिले पनि म खुसी नै छु । श्रीम’तीलाई छोरालाई धोका दिएर अर्को विवाह त गर्न हुँदैनथ्यो भन्ने त लागेको छ तर म अहिले निकै खुसी छु । उनले श्रीमती र छोरा’लाई धोका दिनुपर्ने कारण पनि छैन ।
मलाई मन पर्थेन भने किन नौमती वाजा बजा’एर, हेर्न गएर र माग्न गएर किन लि’एर आउनु भयो त ? श्रीमतीले यस्तो प्रश्न राख्दा श्रीमानसंग कुनै जवाफ भने छैन । आफ्नो पहिलो विवाह र पहिलो माया नै श्रीमानसंग भएका का’रण श्रीमती अहिले पनि श्रीमानको माया लाग्ने बताउँछिन् ।
धनकुटा जिल्ला’को चौविसे गाउँ पालिकाको कार्याल’यमा दुई वर्ष पछि भेटिएका श्रीमान श्रीमती’बीचको कुराकानी हो । झापाको दुनावारी बस्ने कालिका खतिवडा जसको उमेर २१ वर्षको मात्र छ उनको उमेर १७ वर्षको हुँदा नै वि’वाह भएको थियो ।
छोरा जन्मि’एको केही समयमा नै उनका श्रीमानले अर्काको श्रीमती लिएर हिडेका थिए । श्रीमतीले आफुलाई धोका दिएर अर्का’को श्रीमती लिएर हिँडे भन्दै मिडि’यामा आएपछि भने उनका श्रीमान सम्पर्कमा आएका हुन् ।
उनीह’रुको भेट धनकुटाको चौविसे गाउँ’पालिकामा भएको हो । मेघराजले कालिकालाई माग्न गएर पञ्चे’वाजा वजाएर नै विवाह गरेका थिए । तर उ’नको मन किन भरियो ? त्यसको कुनै कारण छैन । इताजा खबरबाट
Last Updated on: May 8th, 2021 at 1:43 pm